Dagaal culus oo ka dhacay duleedka Beledweyne [Dhageyso]
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Dagaal qaraar ayaa saaka ka dhacay Maroodille ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kadib markii Xoogaga Al Shabaab weerar ku qaadeen saldhigyo ciidanka dowladda leeyihiin.
Dagaalkan oo u dhaxeeya Al Shabaab iyo ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kasoo baxaya warar is-khilaafsan oo ku aadan khasaaraha iyo cida heshay libinta iska-hor-imaadka dhacay.
Maxamed Cali Maxamuud oo ah ku xigeenka dhanka amniga iyo Siyaasadda Gudoomiyaha Beledweyne ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay dagaalka, oo uu sheegay in ciidamada iska-caabiyeen weerarka Al Shabaab.
Wuxuu sheegay in wax khasaaro ah dhankooda kasoo gaarey dagaalka, balse ay Al Shabaab ka dileen hal dagaalyahan mid kalena ay ka dhaawaceen.
Al Shabaab ayaa dhankeeda war ay soo saartey ku sheegtay in ay la wareegtay gacan ku haynta deegaanka kadib weerarka, kaasi oo dhaliyay khasaarooyin kala duwan oo labada dhinac iyo dadka deegaanka uu soo gaarey.
Deegaanka Maroodille, oo qiyaastii 22KM dhanka galbeed uga beegan Beledweyne ayaa xaaladiisu kacsan tahay saaka, waxayna dadka deegaanka soo sheegayaan inay socdaan dhaq-dhaqaaqyo ciidan.
Soomaaliya: Xubno katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay Hiiraan
Soomaliya 25.01.2018. 12:42
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo kahor tagey weerar Al-Shabaab...
Mid kamid ah Ergadii doorashada oo lagu dilay Beledweyne
Soomaliya 21.07.2018. 14:22
Soomaaliya: 32 katirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay Hiiraan
Soomaliya 17.03.2018. 10:38
Wararkii ugu dambeeyay Qarax Culus oo ka dhacay Gobolka Hiiraan
Soomaliya 29.10.2018. 23:02
Soomaaliya: Cabsi soo wajahday Shacabka Beledweyne
Soomaliya 19.04.2018. 10:58
Dagaal qaraar oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose
Soomaliya 14.07.2018. 23:42
Ku dhawaad '100' katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay Hiiraan
Soomaliya 12.06.2018. 16:17